samsung & apos; ss rasmi ah usb-c to hdmi dongle oo loogu talagalay galaxy note 9 taageerada dex hadda waa iib
Ugu Weyn Ee Wararka & Dib U Eegista Samsung & apos; rasmiga rasmiga ah ee USB-C iyo HDMI dongle ee taageerada Galaxy Note 9 DeX hadda waa la iibinayaa
Samsung & apos; rasmiga rasmiga ah ee USB-C iyo HDMI dongle ee taageerada Galaxy Note 9 DeX hadda waa la iibinayaa
Haddii aad jeceshahay waxa Samsung & rsquo; s ay ku sameynayeen isku xirnaanta 'DeX interface' iyo agabyada tan iyo horaantii sanadkii hore ama aad u maleyneyso khibradda desktop & rdquo; weli waa halkii sirgaxan oo ku xaddidan tahay ka shaqeynta, waa inaad qirtaa & rsquo; quruxsan qabow in Galaxy Note 9 ma & rsquo; t u baahan Pad ama Dock gaar ah .
Waxa intaa dheer in la fududeeyo in telefoonkaaga lagu xiro kormeeraha oo lagu raaxeysto khibrad u eg PC & rdquo; shaashadda weyn, Samsung sidoo kale waxaa laga yaabaa inay sidoo kale ka dhigtay mid ka jaban in Note 9 loo rogo kombiyuutar habboon.
La siiyay, ka Galaxy S9-waafaqsan DeX Pad waxaa loo heli karaa qiimo jaban oo waali ah dhawaan, laakiin USB-C ilaa HDMI adapters-ka waxaa si joogto ah loogu iibiyaa $ 20, $ 15 ama xitaa ka yar. Haddana mar labaad, haddii aad markii hore ka walwalsan tahay tayada iyo iswaafajinta, waxaa laga yaabaa inay tahay fikrad wanaagsan inaad iibsato Samsung & rsquo; iskaa u gaarka ah.
Tan waxaa lagu soo warramey inay si dirqi ah ku bilaabatay iibinta Amazon, waana tan horeyba looga calaamadeeyay $ 49,99 liiska qiimaha si aad u macaan badan $ 31.01. Marka laga reebo iswaafajinta DeX oo buuxa (kharash la'aan, xirasho weyn looma baahna), adabtarada ayaa bixisa taageerada caadiga ah ee UHD iyo 4K TVs, iyo sidoo kale heerka cusbooneysiinta 60Hz, iyo labadaba HDMI 2.0 iyo Display Port 1.2 technology.
Qalabka muraayadaha aasaasiga ah ee shaashadda muraayadaha, rasmiga rasmiga ah ee Samsung USB-C iyo HDMI dongle wuxuu taageeraa nooc kasta oo heer sare ah oo ka socda Galaxy Note 8 illaa Galaxy S9, S9 +, S8, iyo S8 +. Laakiin si cad, habka ugu wanaagsan ee loo adeegsan karo sheygan ayaa ah isku xirnaan aan kala go 'lahayn oo u dhexeeya Galaxy Note 9 iyo nooc kasta oo kormeera karti u leh HDMI si kasta oo ay tahay.
xigasho: Amazon via SamMobile
u beddel lambarka verizon
ku hel sheyga css xulista
sida loo isticmaalo sim eject tool
5 kormeerayaal cadaadis dhiig oo caqli badan oo kuxiran aaladaha Android iyo iOS
Maxay Taleefoonada LG ugu caansanayn sidii ay ahaan jireen?
Samsung Galaxy Note 8: talooyin iyo tabaha
LG G Stylo waa taleefan casri ah oo dhex dhexaad ah oo leh kaararka xusuusta ee 2TB
Xaaladaha khafiifka ah ee ugu fiican Google Pixel 2 XL
Apple & apos; ageless iPhone 6s iyo 6s Plus ayaa lagu iibinayaa qiimo waali ah oo hooseeya waqti xaddidan
6 kiis maqaar oo weyn oo loogu talagalay Samsung Galaxy S7 gees
Sony waxay ku dhawaaqday qiimaha Mareykanka waxayna sii deyneysaa taariikhaha Xperia XZ Premium, Touch, iyo XA1 Ultra
Sida looga saaro xayeysiiska pop-upka taleefankaaga Samsung Galaxy
Xisaabiyaha xisaabiyaha macruufka wuxuu leeyahay dhowr tabaha ilaa shaashadda